ဓါတ်​ပုံ​က​နေ ​ခဲ​ခြစ်​ပန်း​ချီ ​ပြု​လုပ်​နိုင်​သော Pencil Sketch 6.51 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မေး ​ခင်​ထူး​ပ​ပး​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရှင့် .. ​မီး ​ကို​ကို ​နိုင်​ငံ​ခြား​မှာ ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​မီး​ပုံ​ကို ​ကို​ကို​က​နေ ​ခ​ဏ​လေး​နဲ့ ​ပန်း​ချီ​ဆွဲ​ပြ​လိုက်​တာ ​အ​ရမ်း​တော် ​ပါ​တယ်။ ​ဆွဲ​ပြီး​သား​ကို​လည်း scan ​ဖတ်​ပြီး ​ပို့​ပေး​လိုက်​ပါ​ဒယ်။ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​ပေါ့. ​မ​နာ​လို​ဘူး​လေ. ​အဲ့​ဒါ software ​နဲ့ ​ဆွဲ​တာ​လည်း ​ဖြစ်​နိုင်​တယ်။ ​မ​ယုံ​ရင် ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ဆီ ​မေး​ကြည့်​ပါ​လို့ ​ပြော​ပါ​တယ် ​ကို​နေ။ ​မီး​ကို​ကို ​ပို့​တာ ​အ​စစ်​လား ​အ​တု​လား​ဟင်။ ​အ​တု​ဆို​ရင်​တော့ ​ကွှား​ထား​တာ​တွေ ​အ​ရှက်​ဗျန်း​ဗျန်း​ကွဲ​မယ် ​ထင်​ပါ​တယ် ​ကို​နေ​ရှင့်။ ​တ​ကယ်​ရ​တယ်​ဆို​ရင် ​မီး​ပုံ​ပို့​လိုက်​ပါ့​မယ်။ ​တ​ကယ် ​ပ​လို​ဂ​ရမ်​နဲ့ ​လုပ်​လို့​ရ​တယ်​ဆို​ရင် ​တစ်​ပုံ​လောက်​လုပ်​ပြီး ​သက်​သေ​ပြ​ပေး​လို့ ​ရ​မ​လား​ရှင့်။ ​မီး​ဖုန်း​စမ်း​ခေါ်​ကြည့်​သေး​တယ်။ ​ဟုတ်​ကဲ့​ပါ​ချည်း ​ပြော​ပြီး ​ဖုန်း​ချ​ချ​ပစ်​တာ ​ဘာ​လို့​ပါ​လဲ​ရှင်။
​ဖြေး ​ကို​ခင်​ထူး​လား ​မ​ပ​ပ​လား ​တော့ ​မ​သိ​ပါ​ဘူး။ ​အဲ့​လို​မျိုး ​ဆွဲ​လို့ ​ရ​ပါ​တယ်။ scan ​ဖတ်​ပြီး ​မေးလ်​က​နေ ​ပို့​လိုက်​တာ​ကို​တော့ ​ကျွန်​တော်​လဲ ​အ​ကြံ​မ​ပေး​တတ်​ပါ​ဘူး ​ခင်​ဗျာ :P .. ​သား​ဖွား​ခန်း​တို့၊ ​ခွဲ​စိတ်​ခန်း​တို့ ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​ဓါတ်​ခွဲ​ခန်း​တို့​တော့ ​ပို့​လို့​ရ​မယ်​ထင်​ပါ​တယ်။ ​နီး​စပ်​ရာ ​ဓါတ်​ခွဲ​ခန်း​သာ ​အ​မြန်​ပို့​လိုက်​ပါ။ ​ကျွန်​တော့်​ကို​တော့ ​မ​ပို့​လိုက်​ပါ​နဲ့။ ​အ​ဟီး​ဟီး။ ​တ​ပေါ်​ကျဲ့ ​တ​ပည့်​ကျော်​တွေ​တော့ ​သင်​တန်း​မှာ ​အ​များ​ကြီး​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​အင်​တာ​နက် ​သုံး​နည်း​လက်​တွေ့​သက်​ပေး​ထား​တာ ​ပူ​ပူ​နွေး​နွေး​တွေ ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​မ​ဟုတ်​ရင်​လည်း ​ကိုယ့်​ဟာ​ကို ​လက်​တွေ့ ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ ​ကျွန်​တော် software ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်။ ​ဟုတ်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​စိတ်​ညစ်​ပြီး ​အပ်​ချည်​ကြိုး​နဲ့ ​လည်​ပင်း​ချီ​ပြီး ​သေ​ကြောင်း ​မ​ကြံ​ပါ​နဲ့​လို့ ​အ​ကြံ​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ။ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ ​မ​ခင်​ထူး​ခင်​ဗျာ... ​မ​ယုံ​ရင် ​ကွန်​ပျူ​တာ​ထဲ ​အင်​စ​တော်​လေး​ရှင်း ​လုပ်​ပီး ​ပ​လယ်​ဒီ​ကယ် ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ ​ဟုတ်​မ​ဟုတ် ​အန်​စာ​တုံး​တွေ့​ပါ​လ်ိမ့်​မယ်။ ​အဲ့​ဒီ့​ထက် ​ပို​တိ​ကျ​တဲ့ ​သတ်​သေ ​လို​ချင်​ရင်​တော့ ​ဒီ​မှာ ​သွား​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ ​မူ​ရင်း ​ဝက်​စိုက်​နဲ့ ​သတ်​သေ​တွေ​ပါ :P ​ဖုန်း​ချ​လိုက်​တာ​က​တော့ ​တား​တား ​ကြောက်​လို့​ပါ။ ​သတ်​တော့ ​မ​သေ​ပါ​ရ​စေ​နဲ့​ဦး ​အ​မေ​ဆူ​လိမ့်​မယ်။ ​အ​ဟီး​ဟီး။ ​စိတ်​မ​ရှိ​ပါ​နဲ့။ ​မ​လေး​စား​လို့​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ​ကျွန်​တော် ​သင်​တန်း​ချိန်​ဖြစ်​နေ​လို့​လည်း ​ပါ​ပါ​တယ်။
​ကျန်​တဲ့​သူ​များ​လည်း ​ပ​လယ်​ဒီ​ကယ် ​စမ်း​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ​လို​ချင်​သူ​များ ​အောက်​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ :)
Mediafire | Filecloud | Minus
​အိပ်​မက်​ဖူး August 16, 2012 at 11:19 AM
password ​တောင်း​နေ​တယ် ​ကို​ညီ​နေ​မင်း
​အ​လင်း​အိမ် August 16, 2012 at 12:25 PM
ီDownload ​လည်း ​မ​ရ​တော့​ဘူး..​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​ပါ့ ..​ကို​ညီ​ရေ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး
​အ​လင်း​အိမ် August 16, 2012 at 12:27 PM
pon yate whlar August 16, 2012 at 2:27 PM
heart August 17, 2012 at 1:54 PM
​ရာ​ဇာ​ထွေး August 17, 2012 at 11:00 PM
​ပြန်​သွား​တတ်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ(​တောင်း​ပန်​ပါ​တယ်​အ​ကို​ရေ)..​ဒီ​တစ်​ခါ​တော့​ခင်​ထူး​ပ​ပ​မေး​ထား​တဲ့​မေး​ခွန်း​ကို ​အ​ကို​ဖြေ​ထား​တာ​လေး​ဖတ်​ရ​တော့ ​ရယ်​ရ​တာ​ဗိုက်​တောင် ​အောင့်​တယ်​အ ​ကို​ရေ...
​ဒါ​ကြောင့်​အ​ခု​မှ​ကျွန်​တော်​ကွန်​မန့် ​ဝင်​မန့်​ဖြစ်​သွား​ပါ​တယ်​အ​ကို ​ရေ... ​အ​စ​စ​အ​ရာ​ရာ​အ​တွက်​ကျေး​ဇူး​အ​များ​ကြီး​တင်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ...
kolin August 18, 2012 at 1:36 PM
download ​လင့် ​က download ​လုပ်​လို့​မ​ရ ​ဖြစ်​မေ​တယ်
​ဟန်​ကို ​ကို August 19, 2012 at 6:41 PM
​ကို​ညီ​ရေ ​ကျ​နော်​က ​တော့ ​ကို​ညီ​တင်​တာ​ဆို ​ရင်​အား​လုံး​နီး​ပါး ​ဒေါင်း​ပြီး ​သုံး​ကြည့်​တယ်..​တစ်​ချို့ ​ဆော့​ဝဲ​တွေ​ကျ​တော့ ​မ​သုံး​တတ်​ဘူး​ဗျ ​ကို​ညီ့​ကို ​မေး​ရ​မှာ​လဲ ​အား​နာ​လို့ ​မ​မေး​ဖြစ်​ဘူး...Antilogger ​တို့ ​ဘာ​တို့ ​ဆို​ကျ​နော် ​မ​သုံး​တတ်​ဘူး..​ကို​ညီ့ ​ဆီ​က​နေ ​လေ့​လာ​ပြီး ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို ​သုံး​တာ ​တော်​တော်​လေး ​တိုး​တက်​လာ​ပါ​တယ်..​ထိုင်​ရှိ​ခိုး ​ချင်​လောက်​အောင်​လဲ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်..​ကျ​နော်​ခု ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​တာ​က ​တော့ Internet Download Manager ​ပဲ ​ဗျာ..​ဘယ်​လို ​မှ Update ​ဖြစ်​အောင်​တင်​လို့ ​မ​ရ​ဘူး.Patch file ​ကို ​ဘယ်​လို ​သုံး​ရ​တယ်​ဆို​တာ ​ပြော​ပေး​ပါ ​ကို​ညီ..​အ​စဉ်​လေး​စား​လျက်...​ကျ​နော့် ​မေး​က hankoko21@yahoo.com ​ပါ..​ကူ​ညီ​ပါ​နော် .....
winminhtoo7 August 21, 2012 at 3:14 PM
​မော်​လ​မြိုင်​သား August 31, 2012 at 6:11 PM
​ကျွန်​တော်​လည်း ​ကို​ရာ​ဇာ​ထွေး ​လို​ပါ​ပဲ ​ကော်​မန့်​ပေး​ဖို့ ​တစ်​ခါ​မှ ​မ​ပေး​ဖြစ်​ခဲ့​ဘူး
​လို​ချင်​တာ​တော့ ​လာ​လာ​ပြီး​ယူ​သွား​ပါ​တယ် ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​အ​စ​စ​အ​ရာ​ရာ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပြီး
​သည့်​ထက်​မ​က ​အောင်​မြေ ​ပါ​စေ​ဗျာ....
GadgetOcean Ygn September 1, 2012 at 1:14 PM
Extract ​လုပ်​တော့ password ​တောင်း​နေ​တယ်​ဗျို့.....
​ဧ​ရိ​ယာ ၁၀၂၄ September 6, 2012 at 8:19 PM
​ကို​ညီ​ရေ ​လာ​ဒေါင်း​သွား​ပါ​တယ် ​ဒီ​ထက်​မ​က​အောင်​မြင်​ပါ​စေ
Lionmen September 9, 2012 at 12:13 AM
pro grammer September 12, 2012 at 4:57 PM
saver September 18, 2012 at 10:25 AM
Sai Lay October 3, 2012 at 12:35 PM
koye zaw October 22, 2012 at 11:32 AM
koye zaw October 22, 2012 at 11:35 AM
Unknown November 25, 2012 at 1:09 AM
​အ​စဉ်​လေး​စား​စွာ​ဖြင့် ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ခင်​ဗျာ ​ခဲ​ခြစ်​လုပ်​တဲ့​ဆော့​ဝဲလ်​ရော serial number ​ရော​ဒေါင်း​ပြီး​ပါ​ပြီ ​ဆော့​ဝဲလ်​ကို​လည်း run ​ပြီး​ပါ​ပြီ serial number ​ကို​ဘယ်​လို​ထည့်​ရ​မ​လဲ ​ဆို​တာ​လေး ​ကူ​ညီ​ပါ​လား ​ခင်​ဗျာ ​လေး​စား​စွာ​ဖြင့် 007playboy1500@gmail.com
​င​ထက် December 3, 2012 at 9:41 AM
​အ​ကို ​ရေ... ​ကျွန်​တော် Minus ​က ​နေ​လုပ်​ကြည့်​တော့ 30002 - 30002.rar - Minus ​ဆို ​တဲ့ ​ဆိုဒ်​ကို ​ရောက်​သွား​တယ်..​ပြီး​တော့ ​ဒေါင်း​လုပ် ​အိုက်​ကွန်​လေး​ကို ​နှိပ်​ကြည့်​တော့ ​အဲ​ဒီ ​ပေါ့​ခ်ျ ​ပဲ ​ပြန်​ပြန်​ပေါ်​လာ​တယ် ​ဘယ်​လို​ဖြစ်​တာ​လည်း ​ဆို​တာ ​ပြော​ပေး​ပါ​ဦး​ဗျာ..
kokohtun July 18, 2013 at 7:51 PM
pn2010 July 27, 2013 at 2:38 PM
​အိုင်​ဒီ​အမ်​ကို ​အပ်​ဒိတ်​လုပ်​လိုက်​တာ ​စီ​ရီ​ရယ် ​တောင်း​နေ​တယ်​ဗျာ ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး
thura soe September 13, 2013 at 12:25 PM
download ​လုပ်​လို့​မ​ရ​ပါ​ဘူး ​ခင်​ဗျ
removed by organizer or mediafire ​လို့​ပြော​ပါ​တရ် ။
​အ​ကို ​ရေ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ပါ​ဘူး
မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာအတွက် ဘောင်(.png အကြည်)
တော်တော်များများမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုလွှာအတွက် အခက်အခဲရှိကြတယ်။ ဘောင်တွေက မကြည်လို့ အဆင်မပြေဘူးလို့ အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက် ဘောင် ၂ မျိုးကို png ...
​ဓါတ်​ပုံ​က​နေ ​ခဲ​ခြစ်​ပန်း​ချီ ​ပြု​လုပ်​နိုင်​...
Acer Aspire 4730G Driver For window7(32bit and 6...
2012 ​အ​တွက် ​အ​ကောင်း​ဆုံး recovery software ​ဆု​...
flash ​ဖြင့် ​ပြု​လုပ်​ထား​သည့် ​ဖိုင်​များ​အားြ...
TeamViewer Corporate v7.0.12541.0 (Full version)ေ...